Huawei Band 6, smartband zuru oke n'ahịa [Nyocha] | Akụrụngwa Akụkọ
Miguel Hernandez | 30/05/2021 10:00 | General, Nyocha
Smart ọla aka yana smart smart bụ ngwaahịa na-abawanye na ndụ anyị kwa ụbọchị. N'agbanyeghị eziokwu ahụ na na mmalite nke ọgbọ nke ngwaọrụ ndị a, ọ dị ka ndị ọrụ anaghị achọ ọrụ ha na atụmatụ ha, nke bụ eziokwu bụ na ụdị dịka Huawei eme nzọ siri ike na Wearables na ihe ndị na-esi na ya bụ ezigbo mma.
Anyị na-enyocha miri emi Huawei Band 6 na-adịbeghị anya, ngwaọrụ nwere nnwere onwe dị ukwuu na njirimara nke ngwaahịa adịchaghị. Chọpụta anyị ihe anyị nwere na Huawei Band 6, ike ya na kwa adịghị ike ya.
1 Akụrụngwa na imewe: Karịrị mgbaaka dị mfe
3 Nnukwu ihuenyo na nnwere onwe ya
Akụrụngwa na imewe: Karịrị mgbaaka dị mfe
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụdị nzọ na obere ọla aka, yana atụmatụ na-enweghị atụ na anyị ga-asị na ebumnuche ịzobe ha, Huawei emeela nke ya na Band 6. Nke a na-atụle mgbaaka dị ezigbo nso ịbụ smartwatch ma na ihuenyo, site nha na site na nhazi ikpeazụ. N'ezie, ọ na-echetara anyị ngwaahịa ọzọ nke ika dịka Huawei Watch Fit. N'okwu a anyị nwere ngwaahịa dị mma, yana bọtịnụ n'akụkụ aka nri ma a na-enye ya na nsụgharị igbe atọ: Gold na Black.
Huawei Band na-amasị gị? Ọnụahịa ahụ ga-eju gị anya na ọnụ ụzọ ahịa dị ka Amazon.
Akụkụ: X x 43 25,4 10,99 mm
Ibu ibu: 18 grams
A na-ejikọ ọnụ ọnụ ya, na ihe ndị ọzọ iji kwado ịdịgide na nguzogide ya. N'ezie, anyị anaghị ahụ oghere maka igwe okwu ma ọ bụ igwe okwu na mgbaaka a, ha adịghị adị. The n'azụ bụ maka abụọ Nchaji mkpọ na maka sensọ na-elekọta nke SpO2 na obi ọnụego. Ihuenyo ahụ nwere akụkụ buru ibu n'ihu ma ọ bụ ịrụ ụka adịghị ya na onye isi ihe eji emepụta ihe ahụ, na-eme ka ngwaahịa ahụ dị nso na smartwatch. O doro anya na imepụta ahụ bụ plastik maka igbe ahụ, na-akwado ịdị ọkụ ya, n'otu ụzọ ahụ ka e si kee eriri nke silical hypoallergenic.
Na nke a Huawei Band 6 Anyị ga-enwe isi ihe mmetụta atọ, accelerometer, gyroscope na ngwa anya nke obi nke Huawei, TrueSeen 4.0 nke a ga - agwakọta iji nyefee nsonaazụ SpO2. N'akụkụ ya, njikọta a ga-agbụ agbụ na Bluetooth 5.0 nke ụkpụrụ nyere anyị ezigbo nsonaazụ sitere n'aka Huawei P40 nke anyị jirila maka ule.
Anyị nwere nguzogide mmiri nke anyị na-amaghị IP nchedo na ọ nwere ike ịbanye na 5 ATM. Banyere batrị ahụ, anyị nwere 180 mAh na ngụkọta nke a ga-ebubo site na ọdụ ụgbọ mmiri magnet nke gụnyere na ngwugwu, ọbụghị nkwụnye ọkụ, yabụ anyị ga-erite uru na ngwaọrụ ndị ọzọ anyị nwere n'ụlọ. Nke a Huawei Band 6 ga-adaba na ngwaọrụ iPhone site na iOS 9 na gam akporo site na nsụgharị nke isii ya. Anyị enweghị wearOS dị ka enwere ike ịtụ anya ya, anyị nwere sistemụ arụmọrụ nke ụlọ ọrụ Eshia na-arụkarị ọrụ ndị a nke ọma.
Nnukwu ihuenyo na nnwere onwe ya
Ihuenyo ga-ewepụta ihe ngosi niile, nke ahụ bụ la Huawei Band 6 ọdọk a 1,47-anụ ọhịa panel na ga-ogide 64% nke n'ihu Ngụkọta dị ka data teknụzụ, ọ bụ ezie n'eziokwu, n'ihi nhazi ya dị ntakịrị, mmetụta anyị bụ na ọ na-anọ n'ihu karị, yabụ o yiri ka ọ ga-enwe ọrụ ịme ihe ịga nke ọma n'azụ. Nke a na-ama nke ya aka nwanne m nwoke nke okenye Huawei Watch Fit, nke ihuenyo ya dị sentimita 1,64, nwekwara akụkụ anọ na nhazi. Anyị amaghị ọkwa ọkwa nchedo nwere, agbanyeghị n'ule anyị, ọ kpara àgwà dịka iko siri ike.
Mpempe AMOLED a nwere mkpebi nke 194 x 368 pikselụsy nwere ogo dị elu karịa ọla aka mpi dịka ama ama Xiaomi Mi Band. N'ihi nke a, a na-ahụ ihuenyo ahụ n'ehihie, n'agbanyeghị eziokwu na enweghị ụcha akpaka. Ọkwa dị ka ọkwa nke atọ nwere ike ịbụ nke ga-arụ ọrụ dị ka squire iji nwee ike ijikwa ya ngwa ngwa na-enweghị ike ijikwa nchapụta na-enweghị ike imebi batrị ahụ
Ihuenyo nwere ọkwa nke mmetụ aka nke mere n'ụzọ ziri ezi na nyocha ahụ, ihe nnọchianya nke agba dịkwa mma, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị echee na ezubere ngwaọrụ ahụ iji kwụpụta nkwojiaka anyị ma ghara ịnụ ụtọ ihe nkiri, m na-ekwu, saturation nke agba na ọdịiche dị iche iche na-amasị ịgụ ọgụgụ nke Huawei Band 6 chọrọ inye anyị oge niile. Ihuenyo ahụ dị mma maka iji ya kwa ụbọchị.
Batrị ahụ agaghị enwe nsogbu, ọ bụ ezie na ndị 180 mAh nwere ike iyi obere ka anyị, eziokwu bụ na site na iji ihe anyị na-eme kwa ụbọchị, Huawei Band enweela ike enye anyị 10 ụbọchị nke iji, enwere ike ịgbatị na 14 ma ọ bụrụ na ị mepụta usoro aghụghọ nke ga - egbochi anyị ịnụ ụtọ ngwaọrụ ahụ.
Anyị nwere njikwa mmegharị ahụ:
Elu: Ebe Ngosiputa
Aka ekpe ma ọ bụ aka nri: wijetị na presets dị iche iche
Ya mere, anyị ga-enwe ike iji ngwaọrụ ahụ na-emekọrịta ihe, si otu a dozie nchapụta, akụkụ, ọnọdụ abalị ma jụọ ozi ahụ. N'ime ngwa arụnyere anyị ga-enwe:
Ihe mmetụta ikuku oxygen
Arụ Ọrụ Register
Leepra ihi ụra
Omume iku ume
Oge nche, oge, oti mkpu, tọọchị, chọọ na ntọala
N'ikwu eziokwu, anyị agaghị echefu ihe ọ bụla na mgbaaka a, n'agbanyeghị na anyị agaghị enwe ike ịgbatị ya.
Anyị enweghị ike ịtụ anya ọrụ ndị ọzọ sitere na ya, anyị nwere mgbaaka quantifying nke na-akụ ndị na-agba ya ọsọ na imepụta yana na ihuenyo na ọnụahịa nke 59 euro naN'ikwu eziokwu, ọ na - eme m ewepụ asọmpi niile. GPS nwere ike na-efu, ejiri m n'aka, mana ọ gaghị ekwe omume ịnye karịa maka obere. Ahịa Huawei a bụ "ọnụ ala" adịgoro kpamkpam.
Ihe na: Mee 30 nke 2021
Nnukwu, ihuenyo dị elu
Exceptiondị pụrụ iche
Nnwere onwe dị ukwuu na ọnụ ala dị ala
Enweghị GPS dị n’ime ya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Huawei Band 6, smartband zuru oke na ahịa [nyocha]